Gnome 3.16, yazvino vhezheni yakagadzika yeGnome, yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Desks, General, Noticias
Mumaawa mashoma takagamuchira nhau dzinofadza dze kuburitswa kweGnome 3.16, yazvino vhezheni yedesktop inozivikanwa iyo inosanganisa inonakidza kuvandudzwa uye kugadziridzwa kwakatsanangurwa nenharaunda yayo Sekureva kwekuburitswa kwepepanhau, Gnome 3.16 inosanganisira 33.525 shanduko dzakarongwa nevanyori vanopfuura chiuru vakasiyana.
Iyo ziviso system yashandurwawo, ichioneka muchimiro chemazita emameseji uye nekukwanisa kupindura kune akakurumbira pop-up mabhendi atanga tatova neiyo yapfuura vhezheni. Karenda, magadzirirwo ayo uye kugoverwa kwayo ndechimwe chinhu chakashandurwa, zvichiratidza kwete chete karenda asiwo kugadzwa uye zviyeuchidzo.
Pamwe chete neichi chakadzama shanduko yekushongedza kudesktop pamwe nekushanda. Mukati meyekupedzisira, zvinomira kuwanda kuwedzerwa kwakadai sekutarisa kwefaira, chiyero chekutarisa, nezvimwewo ... Zvinhu izvo vashandisi vakapa kuti dhata riwedzere kushanda. Vazhinji vanoti kushandisa iyi vhezheni itsva kunobatsira kugadzirwa kwemunhu, pasina zvinokanganisa kana mamamenyu akaomarara anotadzisa basa.
Gnome 3.16 idesktop iro rinotibatsira neangu ega kugadzirwa
Chimwe chinhu chitsva ndechekuti iyo Gnome 3.16 Mepu application ichave nehukama neFoursquare application, iyo ichatibatsira mukutsvaga kwenzvimbo, pamwe nekumwe kugadzirisa uye kugadzirisa kuchishandiso.
Kuvhurwa kwave kuchangobva kuitwa saka hapachina kugoverwa kunoisanganisa zviri pamutemo asi isu tatova nemimwe mienzaniso yacho. Kunyanya, mufananidzo weziso wakagadzirwa kuyedza iyi desktop nyowani. Kugoverwa kuri OpenSuse uye kunyangwe isu tisingazvifarire, zvinopa muenzaniso wakanaka weizvo Gnome 3.16 ichatipa. Kana iwe uchida kuzviedza, unogona kurodha pasi mufananidzo pano. Asi kune mamwe magove arikushanda kuti aipe uye vanogona kunge vatova mumahofisi epamutemo izvozvi, aya ndiArchLinux, KaOS uye zvavanotora. Zvichiri kutanga kwazvo kuziva maonero evashandisi asi mifananidzo yakapihwa inotaridzika chaizvo, Iwe unoti kudini?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Gnome 3.16 yave kuwanikwa
Zvikuru, pakutanga ini ndaisada gnome3, asi kwete nekuti yakashata kana kuti haina basa zvakanyanya, asi asi nekuda kwekugadzirisa kwayo kwaive kwakashata kana kushaya basa, nepo ini ndaishandisa Unity iyo yandaidawo, asi shanduro dzayo dzekutanga, iyo yazvino avo ini ndinodonha zvakashata, zvese zvinorema uye ivo vabvisa zvimwe zveakanakisa maficha uye mashandiro, ikozvino ini ndinoshandisa gnome3 iyo nekuda kwekuwedzera kwayo ndeye mega inogadziriswa kune wese kuravira ... ini ndichaedza demo.
zvisingawanzoitika kesi akadaro
Ini ndichangobva kutamira kuAntergos Linux (mukana wekuti ndishandise Arch Linux sezvo ndisiri nyanzvi yemakomputa). Uye ini ndakacherekedza iyo yangu yaunofarira desktop nharaunda (Gnome) iri yakawanda mvura kupfuura iyo yapfuura system (Ubuntu). Kwete izvozvo chete, iri zvakare mushanduro nyowani. Hazvizotora nguva kuti shanduro 3.16 iwanikwe. Panguva ino ndaona kugadzikana kwakanaka.
Ini ndinofunga kuti Antergos (kana Arch yekushinga) izano rakanaka kune avo vanoda yazvino kubva kuGnome.
Pindura kune zvisingawanzoitika kesi
Santoku Linux: iyo GNU / Linux kugoverwa kwema mobile audits
Papyrus, manotsi akawiriraniswa pakati peLinux, Windows, OS X uye Android